Xildhibaanada Koonfur galbeed ku matala Golaha shacabka oo ku kala aragti duwan doorashada KG • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaanada Koonfur galbeed ku matala Golaha shacabka oo ku kala aragti duwan doorashada KG
Xildhibaanada Koonfur galbeed ku matala Golaha shacabka oo ku kala aragti duwan doorashada KG
November 2, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwo kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa gaashaanka u duruuray eedeha ku aadan in dowlada dhexe ay faragalin ku hayso Doorashadda la filayo in ay ka dhacdo Koonfur Galbeed.
Xildhibaanadan oo la hadlayay idaacada ku hadasha afka dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in haba yaraatee dowlada ay faraglin dadban iyo mid toos ahba ku haynin doorashada madaxweynaha Koonfur galbeed ee dhacaysa 17-ka November.
Waxa ay sheegeen in siwaangsan ay u socoto Ololaha Doorashadda Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed taas oo dhawan lafilayo inay ka dhacdo Magaaladda Baydho.
Cabdullaahi Abshirow oo kamid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in aysan jirin wax faro galin ah oo Dowladda Soomaaliya ku heyso Doorashadda Madaxweynaha ee Koonfur Galbeed taas badalkeedana Dowlad Goboleedyaddu u madax banaan yihiin arrimaha Doorashooyinkooda.
Waxa uu sheegay in shacabka Koonfur Galbeed ay aad u taageersan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya balse ay jiraan sida uu sheegay siyaasiyiin ku awr kacsanaya dadka kuwaasoo ka been sheegaya fikirka dadka KG ay ka qabaan dowlada sida uu hadalka u dhigay.
Dhawaan ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ay dowlada federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen in ay faragalin ku hayso doorashada maamulka Koonfur galbeed kadib shir ay xili habeenimo ah ku qabteen magaalada Muqdisho.
Waxa ay sheegeen in dowladu ay wadato musharixiin gaar ah kuwaasoo diyaarado sida gawaari aan xabadu karin ugu daabushay magaalada Baydhabo oo ah halka loo madlan yahay in ay ka qabsoomto doorashada madaxweynenimo ee maamulka Koonfur galbeed.
Marka laga yimaado ku kala aragti duwaanshiyaha xildhibaanada golaha shacabka ku matala deegaanada Koonfur galbeed ee arimaha doorashooyinka maamulkaasi hadana waxaan daah saarnayn in ay jiraan musharixiin ay kala wataan dhinacyada siyaasada dalka sida xisbiyada mucaaradka ah,maamul goboleedyada iyo weliba sidoo kale dowlada federaalka .